हाम्राे पिपलबाेट » ‘दुई महिना नपुग्दै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता’ ‘दुई महिना नपुग्दै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता’ – हाम्राे पिपलबाेट
‘दुई महिना नपुग्दै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता’
कोरोनाका कारण कामको खोजीमा भारत गएका नेपालीहरु ः
गत वर्ष लकडाउनले रोजीरोटी गुमेपछि दसैँको मुखमा भारत पलायन कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ३ का ध्वज बहादुर नेपाली पुन घर फर्किएका छन् ।, तर महामारीले ६ महिनामै रोजगारी गुमेपछि फेरि हन्डर खाँदै गाउँठाउँ फर्किन विवश भएका छन् ध्वज बहादुर ।
कामको खोजीमा दुई महिनाअघि भारतको मुम्बैको चरेखा पुगेका कोलहलपुर नगरपालिका वडा वडा नं. ३ ध्वज बहादुर नेपाली बाँकेको रुपैडिया नाका हुँदै घर फर्किएका छन । होटेलमा वेटर उनले आगामी दसैँमा घर फर्कने सोच बनाएका थिए । तर, मुम्बैमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै लकडाउनका कारण जागिर गुमेपछि उनी दुई महिनामै घर फर्कन बाध्य भए ।
एक साताअघि रोजगारी गुमेको ध्वज बहादुरले बताए । ‘कोरोना बढेको भन्दै उता होटेल, बजार सबै बन्द छन । लकडाउनमा अर्काको देशमा थुनिनुभन्दा आफ्नै देश फर्के,’ आइतबार बिहान नाकामा भेटिएका उनले भने, ‘केही महिना काम गर्ने सोच थियो । तर, कोरोनाका कारण होटेल बन्द भएपछि फर्कनुपर्यो ।’ उनीसँगै मुम्बैका विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका बर्दियाकाका अन्य ८ जना पनि घर फर्किएका छन । दुई महिनामै फर्कनुपर्दा कमाइ नभएकाले छोराछोरी र परिवारका लागि लुगाफाटोसमेत किन्न नसकेको दुःखेसो उनीहरूले सुनाए । रोजगारी गुमेपछि सुर्खेतका चौकुने गाँउपालिका वडा नं. ५का हरि बहादुर रावत पनि मुम्बैबाट घर फर्किएका छन । गत पुसमा भारत गएका उनी होटेलमा काम गर्थे । कोरोना बढे पनि काम चलेको भए उतै बस्ने सोच बनाएका थिए, तर होटेल बन्द भएपछि सात–आठ दिनदेखि बेरोजगार बनेका उनले लकडाउनमा थप समस्या हुने डरले घर फर्किएको बताए । रुपैडिया नाकामा भेटिएका रावतलाई घर पुगेर बेरोजगार बस्दा आर्थिक समस्याले सताउने चिन्ता छ । देशभित्र सामान्य कामसमेत नपाएपछि अर्काको देश जानुपरेको गुनासो उनले सुनाए । ‘गरिबीका कारण परिवार पाल्न समस्या भएपछि अर्काको देशमा जानुपरेको हो । के गर्नु, स्वदेशमा काम पाइँदैन । परिवार पाल्नकै लागि पनि जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । महामारीको अवधि लम्बिएर लामो समय भारत फर्कन नपाए परिवारको गुजारा गर्न नै समस्या हुने उनले बताए ।
भारतमा संक्रमण तीव्र गतिले बढ्न थालेपछि नेपालीहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन । कतिपयको लकडाउनका कारण जागिर गुमेको छ भने कतिपय कोरोनाको त्रासले घर फर्किरहेका छन । अहिले रुपैडिया नाकाबाट दैनिक कामको खोजीमा भारत गएका नेपालीहरु फर्कने क्रम तिव्र बढेको छ । चरम गरिबीका कारण बाँके, बर्दिया, र कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर जानेको
संख्या ठूलो छ । तर, यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग पनि छैन । नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गरिबीका कारण मजदुरी गर्न भारत जानुपर्ने विगतदेखिको बाध्यता अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसकेको छैन । ‘संक्रमणकै वेला ज्यान जोखिममा राखेर भारत जान बाध्य भएकाहरूको भिड सरकार, राजनीतिक दलका नेता र नीति निर्माणकर्ताले देखेनन । सामान्य कामका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यताको पीडा देश चलाउनेले बुझेनन्,’ कोरोनाकै वेला नाकामा आउने र जानेको भिड देखेको भए रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना आउँथे ।’ विद्यालय जानुपर्ने कलिला किशोरदेखि कपाल सेताम्य भएका वृद्धसम्म कामको खोजीमा भारत जाँदै गरेको दृश्यले राज्य सञ्चालन गरिरहेका लाई नछुनु विडम्बना हो । भारतबाट फर्केकामा संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ । यस्तो वेला परीक्षण नगरीकनै घर पठाउँदा संक्रमण झन् चाँडो फैलने जोखिम अत्यधिक बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन ।
८ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित